बोलबम : सेती किनारदेखी मन्दिरसम्म (फोटो फिचर) – Tandav News
बोलबम : सेती किनारदेखी मन्दिरसम्म (फोटो फिचर)
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७६ श्रावण ६ गते सोमबार ११:०८ मा प्रकाशित
साउन सुरु भएसँगै सोमबारको पनि त्यतिकै महत्व छ । यो महिनामा शिवको पूजा गरे सबै देवताको पूजा गरे बराबर फल प्राप्त हुन्छ भन्ने सनातन विश्वास रहेको पाईन्छ । धार्मिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण भएकाले यो महिनालाई विशेष रूपमा लिइन्छ ।
हिन्दु धर्मावलम्बीहरुले विशेषगरी साउनको सोमबार शिवजीको व्रत एवं पूजा गर्ने चलन छ । पार्वतीले साउन महिनाभरि निराहर रही कठोर व्रत बसेर भगवान शिवलाई प्राप्तगरेको किम्वदन्ती सुनेका हुनाले महिलाहरूले यसलाई बढी महत्व दिने गर्दछन । यो महिनामा व्रत बसि शिवको पूजा गरे आफू, श्रीमान, सन्तान एवं परिवार सबैको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास छ । महिनाको अरू दिन नसके पनि सोमबार व्रत बसी शिवलाई शुद्ध जल चढाएर खुसी बनाउन सकिन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता समेत रहेको छ ।
पाखरा महानगरपालिका १ बगरमा रहेको गाईघाटमा बोलबम यात्रीहरू बिहानै गई सेती गंगाको जलले स्नान गरी सुर्य भगवानलाई जल चढाउने प्रचलन रहेको छ ।
साथै उक्त जल, बेलपत्र तथा दुध बैदाम स्थित केदारेश्वर मन्दिरमा रहेको १ सय ८ शिवलिङ्गमा चढाउने गर्दछन् ।
तस्बिर : सुशान्त गाहा मगर/ताण्डव न्युज
पोखरामा राष्ट्रिय नाटक महोत्सव, पहिलो दिन ‘थाङला’ मञ्चन हुने
डा कोइरालाको खण्डनःसभापतिसँग तारे होटलमा वार्ता भएको भन्ने समाचार भ्रामक
खै! कति दिनमा पुगिन्छ रोल्पा ?
वात्स्यायान सहित ३६ कलकारको चित्रकला प्रदर्शन पोखरामा आजदेखि शुरु
चटपटे किनबेचको विषयमा बालिका हत्या गर्ने पक्राउ